... 10:09:00 PM
အက်ဆေးအဖြစ် အကျယ်ဖွဲ့ နွဲ့ ရေးရင် ဖတ်လို့ လည်း ပိုကောင်း ငြင်းမယ့်သူတွေလည်း ပိုများလိမ့်မယ် ထင်တယ်နော်။
28 March 2009 at 10:39 PM
ကျေးပုံပြင် မှာ Comment လေးလာပေးသွားတဲ. အတွက် ကျေးဇူးပါ ၊၊ ဟုတ်တယ် ၊၊ အခု မူရင်းစာလေး အုပ်လေး မြန်မာပြည် ကို မှာထားတယ် ၊၊ အပိုင်း ၂ ဆက်ရေး ဖြစ်လိမ်. မယ်ထင်တယ် ၊၊ ဖုန်းနဲ. တစ်ယောက် ကတော. လှမ်းဆွေးနွေးတယ် ၊ တော်တော်တော. ပြောပြီးပြီ ၊၊ ဒါကြောင်. ထပ်ရေးဖို. စဉ်းစားနေတာ ၊၊
28 March 2009 at 10:51 PM
အဲဒါပေါ့ဗျာ။ ဗီလိန်မှာလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့ သူပါ။ ဗီလိန်တွေကို မမုန်းပါနဲ့။ :)
30 March 2009 at 10:38 AM